ढाडमा पलाउँदै थियो सी’ङ, जब डाक्टरहरूले जाँच गरे, अत्यन्त दु’र्लभ देखेर उ’ड्यो हो’स ! -
ढाडमा पलाउँदै थियो सी’ङ, जब डाक्टरहरूले जाँच गरे, अत्यन्त दु’र्लभ देखेर उ’ड्यो हो’स !
एजेन्सी। विदेशमा एक व्यक्तिको ढाडमा पलाउँदै गरेको गाँ’ठोलाई बेवास्ता गर्न धेरै म’हँगो पर्न गएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा त्यो गाँ’ठोको आकार यति ठूलो भयो कि उनलाइ त्यो आफ्नो ढाडमा ज’नावरको सि’ङ जस्तो लाग्न थाल्यो ।
५० वर्षे ती मानिसलाई जब गाँ’ठोले गा’र्हो भयो र स’मस्यामा परेपछि उनले डाक्टरलाई देखाए, जसलाई देखेर अस्पतालका डाक्टरहरू पनि छक्क परे । उनले जसलाई ज’नावरको सी’ङ भनिरहेका थिए, त्यो क्या’न्सर जस्ता ख’तरनाक रो’गको कारणले सिर्जना भएको थियो । सी’ङको लम्बाइ ५.५ इन्च र चौडाइ २.३ इन्च थियो ।
अस्पतालका डाक्टर प्लोनजेकले छाला क्या’न्सरको यस रूपलाई अत्यन्त दु’र्लभ भनेका छन् । विशेष कुरा यो हो कि जाँचमा डाक्टरहरूले पाए की त्यो सी’ङ छा’ला त्यही प्रोटिनले बनेको पाए जसले कपाल, छा’ला र नङहरू बनाउन मद्दत गर्दछ । डाक्टरहरूले यसलाई स्क्वामस से’ल का’र्सिनोमा अर्थात् छालाको बाहिरी तहमा कोषहरूको क्या’न्सर भनेका छन् ।
डाक्टरहरूले भने कि यस्तो प्रकारको रो’ग देखा पर्नु सार्वजनिक रुपमा छालाको क्या’न्सर सम्बन्धी जागरुकता र स्वास्थ्य सेवाको उपायहरूको बाबजुद पनि यस्ता प्रकारका घ’टनाहरू हुन सक्छन्।
यद्यपि डाक्टरहरू यस कुराले पनि छक्क परे कि पी’डितको क्या’न्सर उनको शरीरको अन्य भागमा फैलिएको थिएन । यस कारणले उनले सायद कहिल्यै उपचार गरेनन् । पछि, डाक्टरहरूले एक अप’रेसनको माध्यमबाट पी’डित व्यक्तिको पछाडिको भागबाट सी’ङ ‘ह’टाए र अहिले ती आराम गर्दैछन् ।
सेनाको ब्यारेकमा फैलियो को’रोना !
उपत्यका प्रवेश गर्ने ४० जनामा देखियो को’रोना, उपत्यकाबासी त्रा’समा
बेकिङ्ग न्युजः काठमाडौं उपत्यकामा ६२ जनासहित, २५९ जनामा कोरोना संक्रमण